के अक्सिजन घरमा राखेर कोरोना उपचार हुन्छ ? यस्तो भन्नुहुन्छ डा अनुप बास्तोलाला - Himali Patrika
के अक्सिजन घरमा राखेर कोरोना उपचार हुन्छ ? यस्तो भन्नुहुन्छ डा अनुप बास्तोलाला
हिमाली पत्रिका १७ बैशाख २०७८, 9:32 pm
घरमा अक्सिजन राखेर कोरोना उपचार हुँदैन। यसरी घरमा अक्सिजन जगेडा गरेर उपचार हुन्छ भनेर ढुक्क नहुनुहोला। यसले झनै खतरा ल्याउन सक्छ। घरमा अक्सिजन स्याचुरेसन हेर्ने अनि अक्सिजन लगाएपछि कोरोनाको उपचार हुन्छ भन्ने सोचेर ढुक्कसँग बस्नु गलत हो।
कोरोना संक्रमण भई निमोनिया भएका संक्रमितको उपचार अक्सिजन लगाएर मात्र हुँदैन। संक्रमणले फोक्सोमा कति असर गरेको छ? निमोनिया भइसकेको कुरा घरमा बसेर थाहा पाउन सकिँदैन। निमोनिया भएको रहेछ भने त्यसको उपचार फरक हुन्छ।
बाहिरबाट अक्सिजन दिँदा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा मात्र मेन्टेन हुन्छ। तर फोक्सोले काम गर्न छोडेको, के कारणले निमोनिया भयो भनेर औषधि, इन्जेक्सन सहितको उपचार चाहिन्छ। घरमा अक्सिजन राखेर गम्भीर बिरामीको उपचार हुँदैन।
पछिल्लो समय आइसियु नभएको भन्ने हल्लाले धेरै संक्रमित घरमा बसेका छन्। अस्पतालमा सबै संक्रमितलाई आइसियुमा नै राख्नु पर्दैन। अक्सिजन भएका अन्य थुप्रै बेड खाली हुन्छन्। तर मानिसले आइसियु बेड मात्र खोजिरहेका छन्। अक्सिजन बेड मात्र आवश्यक हुन सक्छ तर अस्पतालम आइसियु छ कि छैन भनेर सोध्ने अनि छैन भने घरै बस्दा धेरै बिरामीले उपचार नपाएको घटना मैले देखिसकेको छु। त्यसकारण आइसियु छैन भनेर घरमा बस्ने होइन। अस्पतालमा अक्सिजन भएका अन्य बेडमा उपचार हुनेछ।
तपाई संक्रमित भएर बसेको समयमा लक्षण बढ्न थाले वा थप समस्या हुन थाल्यो भने स्वास्थ्यकर्मीसम्म पुग्नुहोस्। अक्सिजन लेबल ९३ भन्दा कम हुन थालेको जस्तो लाग्यो, श्वासप्रश्वास बढयो भने स्वास्थ्यकर्मीको जानुपर्छ। एक्सरे गराउनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीले दिएको औषधि मात्र सेवन गर्नुपर्छ। सुनेको भरमा र सामाजिक सञ्जालमा देखेको भरमा आफूखुसी औषधि नखानुहोला। साभार : स्वास्थ्यखबरबाट